ရှင်ဥပဂုတ်ရှင်းတမ်း – Blue Sea
blueseaskt | January 15, 2019 | Knowledge | No Comments
ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာ လူမျိုးတွေမှာ အတော်များများက
ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို ကိုးကွယ်နေရဲ့သားနဲ့ အယူမှား အမှတ်မှားတွေ
အများကြီးရှိနေပါတယ် ။ တကယ် တော်၍ ထက်မြတ်သော ပါဠိစာပေများကို
နိုင်နင်းသော ဘုန်းတော်ကြီးများက ပြောတာတောင် လက်မခံနိုင်တဲ့
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အများကြီးပါ ။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးက လူသားတွေပါ
ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာကို ဆန်းစစ်နိုင်တဲ့ အသိဥာဏ်တွေရှိပြီးသားပါ ။
လောက သဘာဝ တရားနဲ့ယှဉ်ပြီး ငါတို့ ကိုးကွယ်မှုတွေက တကယ်ရော
ထေရ၀ါဒ စစ်မှန်ရဲ့ လား ငါတို့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဟောကြားခဲ့တဲ့ လမ်းစဉ်တွေရော
ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာ စိစစ်သူ အတော်နည်းပါတယ် ။
ဘုန်းတော်ကြီးတွေ ဓမ္မကထိကတွေထဲက အမုန်းခံကာ ထေရ၀ါဒသာသနာ
မှာ အတုအယောင်တွေ ပပြောက်ဖို့ တွန်းအားပေးခဲ့ပေမယ့်
ရှေးရိုးစွဲနေသော လူ့အတ္တသမားများကြောင့် စစ်မှန်သောထေရ၀ါဒကို
လက်ခံကျင့်သုံးသူ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ နည်းပါးလာပါတယ် ။
အင်မတန် ကြောက်တတ်သော မြန်မာလူမျိုးများအတွက် ခြောက်နိုင်သော
မဟာယန ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့ အယူအဆတွေ လွှမ်းမိုးခဲ့သည်မှာ
ယနေ့ထက်တိုင်ပါပင် ။ ကျွန်တော်ဒီနေ့ ပြောချင်တာလေးက
ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ အလွဲကြီးလွဲနေတဲ့ ရှင်ဥပဂုတ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးပါ ။
စာဖတ်နေသူတွေထဲမှာ ယုံကြည်သူတွေလည်းပါမယ် ၊ မယုံကြည်သူတွေလည်းပါမယ် ၊
ဒွိဟ ဖြစ်နေသူလည်း များမယ် ကျွန်တော့်အသက် ၂၀ အတွင်းမှာ
ဒီစာကိုရေးလိုက်ရတာပါ ။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ဟောပြောချက် ကို
မှန်တယ်ဆိုပြီး ပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ ။ စာဖတ်သူတွေ
ယုံကြည်ရမယ် ၊ လက်ခံရမယ်လို့ မဆိုလိုပါ မိမိအတွေးနဲ့
မိမိ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်လိုက်ပါ ။အဲလိုတွေးဖို့အတွက် ဒီဆောင်းပါးက အထောက်အကူပြုမှာပါ ။
ဒီစာရေးလို့ ကျွန်တော့်အတွက် လူမုန်းပိုများလာမှာ သိရက်နဲ့
ထေရ၀ါဒ သာသနာ အတွင်းမှာ တကယ်ကိုးကွယ်မှုလွဲနေမှုတွေအတွက်
ဆန်းစစ်သုံးသပ်နိုင်အောင် ရေးလိုက်ရတာပါ ။
ဒီအကြောင်းလေးကို စပြောဖို့အတွက် ရှင်ဥပဂုတ် ဘယ်ကစဖြစ်လာသလဲ
ကစပြောရပါလိမ့်မယ် ။ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့ ပါဠိ ကျမ်းဂန်စာပေတွေမှာ
မတွေ့ရတဲ့ ရှင်ဥပဂုတ်က ဘာကြောင့် ဒီလောက် နာမည်ကြီးနေရသလဲဆိုရင်
သီရိဓမ္မာသောက မင်းကြီးရဲ့ အလှူကြီးမှာ မာရ်နတ်နှောက်ယှက်
မည်ကို စိုးသဖြင့် မင်းကြီးက တိဿနာဂထေရ် ခေါ်ရှင်ဥပဂုတ်ကို
ခေါ်ထားပါတယ်တဲ့ ။ အလှူပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာ
မာရ်နတ်က လာဖျက်သဖြင့် ရှင်ဥပဂုတ်က မာရ်နတ်လည်ပင်းကို
ခွေးသေကောင်ပုပ်ဆွဲကာ တောင်းပန်ခိုင်းပါတယ် ။ တောင်းပန်ပြီးတော့မှ
လည်ပင်းက ခွေးသေကောင်ပုပ်ကို ချွတ်ကာ တောင်နံရံမှာ ခါးပန်း
ကြိုးနဲ့ ချည်ထားလိုက်ပါတော့တယ် ။ အလှူပွဲကြီး မပြီးမချင်း
မာရ်နတ်ကို ကြိုးနဲ့ ချည်ထားစဉ် မာရ်နတ်က ဘုရားရှင်ကို
နှောက်ယှက်တုန်းက ယခုလို မခံစားရဘဲ တပည့်သာဝကတွေနဲ့ကျမှ
ယခုလို အနှိပ်စက်ခံရသဖြင့်သာဝကတွေက မေတ္တာ ၊ ဂရုဏာ နည်းပါးလှပြီး
ဘုရားရှင်က မေတ္တာ ၊ ဂရုဏာ ကြီးမားတော်မူသဖြင့် ထိုနေရာမှာတင်ပဲ
မာရ်နတ် ဘုရားဆုကို ပန်ခဲ့ပါတယ် “တဲ့ ဒါက ဇာတ်သမားတွေ
ပြောကြပါတယ် လူအတော်များများကလည်း ဒါကိုသိကြမှာပါ ။
အမှန်တော့ အဲဒီ ဇာတ်လမ်းက မဟာဝင်ကျမ်းက လာပါတယ် ။
မဟာဝင်ကျမ်းကလည်း အဲဒီ ရှင်ဥပဂုတ်
အကြောင်းက လောကပညတ္တိ ကျမ်းက လာတယ်ဆိုပြီး ပြန်လည်ညွှန်းဆိုထားပါတယ်။
အဲဒီကျမ်းကနေ ဘယ်ကိုဘယ်လို ပြန်ပြန်ညွှန်းသလဲဆိုတာတော့ မသိတော့ပါဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျင်းပတဲ့ သင်္ဂါယနာ တင်ပွဲတွေမှာတော့
ရှင်ဥပဂုတ် အကြောင်းတစိုးတစိမျှ မပါလာပါဘူး ။
နောက်တစ်ခါ မဟာယနဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်တဲ့ တရုတ် ၊ ဂျပန် နိုင်ငံတွေက
မဟာယာနဂိုဏ်းသုံး ကျမ်းစာဖြစ်သော ဒိဗျာဝါနကျမ်းမှ ဖန်တီးပေးလိုက်သော ဇာတ်လမ်း ဖြစ်သည်။ ရှင်ဥပဂုတ္တမထေရ်သည် ဣန္ဒဂုတ္တ၊ အဿဂုတ္တ၊ တိဿနာဂ၊ ဥပဂုတ္တတိဿနာဂ၊ အာဂတ်စတယမုနိ ဟူသော ဘွဲ့မည် အမျိုးမျိုးဖြင့် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူ ဖြစ်သည်။
“မဓုရာပြည် ကုဏ္ဍိမြို့ အနီးမှာ ဥရုမုဏ္ဍ အမည်ရှိတဲ့ သာဏတောင်မှာ
သာဏ၀ါသီထေရ် က သတင်းသုံးနေတော်မူပါတယ် ။ အဲဒီ
ကုဏ္ဍိမြို့မှာ နံသာကုန်သည်တစ်ဦးရှိတယ် အမည်က
ဂုတ္တပါ ။ သူ့ မှာ သားသုံးယောက် ရှိပါတယ် ။
အဿဂုတ္တ ၊ ဓနဂုတ္တ ၊ ဥပဂုတ္တ ဆိုပြီး အမည်ရှိကြပါတယ် ။
အဲဒီ ဥပဂုတ္တ အမည်ရှိတဲ့ အငယ်ဆုံးသားက လူဝတ်အနေနဲ့ပဲ
သချိုင်းမှာ ခြေဖြတ် ၊ လက်ဖြတ် ခံရတဲ့ ပြည့်တန်ဆာမ ၀ါသ၀ဒတ္တာ
ကို တရားဟောခဲ့တဲ့အတွက် ပြည့်တန်ဆာမက သောတပန်ဖြစ်ကာ
ဟောပြောသူ ဥပဂုတ္တကတော့ အနာဂါမ် ဖြစ်ပါတယ် ။
အဲဒီ လို အကြောင်းကို သာဏ၀ါသီထေရ်က သိသွားတော့ အဖေဖြစ်တဲ့
ဂုတ္တကို ခွင့်တောင်းကာ ရဟန်းပြုပေးလိုက်ပါတယ်။ ရဟန်ပြုပြီးလို့
အချိန်သိပ်မကြာခင်မှာပဲ အာသဝေါ ကုန်ခမ်းကာ ရဟန္တာဖြစ်သွားပါတယ်လို့”
မဟာယန တွေက ဆိုထားပါတယ် ။ ရဟန္တာဖြစ်ပြီးသွားတော့
တရားပွဲကျင်းပ ပါတယ် အဲဒီမှာ မာရ်နတ်က တရားပွဲပျက်ရန်
ပုလဲမိုးရွာချပါတယ် နောက်တစ်ခါ တရားပွဲကျင်းပတော့
ရွှေမိုးရွာပြီး နှောက်ယှက်ပါတယ် ။ နောက်တစ်ကြိမ် ကျင်းပတော့
နတ်တူရိယာတွေနဲ့ မြူဆွယ် နှောက်ယှက်ပါတယ်
အဲဒါနဲ့ ဥပဂုတ္တလည်း မာရ်နတ်လုပ်မှန်းသိတော့
မာရ်နတ်ကို ဆုံးမဖို့အတွက် မြွေသေကောင်ပုပ်ကို ဦးခေါင်းကိုစွပ်ပါတယ်
နောက်ခွေးသေကောင်ပုပ်ကို လည်ပင်းဆွဲပါတယ် ။
နှစ်ရွက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဆွဲထားပါတယ် အဲဒါကို မာရ်နတ်ရဲ့ တန်ခိုးနဲ့
ဖြုတ်မရပါဘူး အဲဒါနဲ့ မာရ်နတ်လည်း နောက်ဘယ်သာသနာပွဲကိုမှ
မနှောက်ယှက်တော့ပါဘူးလို့ တောင်းပန်ပါတယ် ” အဲဒီလို မဟာယန ကလည်း ဆိုထားပြန်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆို ရှင်ဥပဂုတ် ကို ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုအယူဝါဒတွေနဲ့
သိကြမှာပါ ။ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာ တကယ်ပင်
ရှိနေခဲ့ပါက ပါဠိစာပေများ ကျမ်းဂန်များတွင် ဒီလောက်
တန်ခိုးကြီးသော မထေရ်တစ်ပါးကို ထည့်ရေးခဲ့မည်မှာ ဧကန်မလွဲပါ။
ဒီအပိုင်းလေးကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အတွေးအမြင်တွေကိုဖော်ပြပေးမှာပါ
မိတ်ဆွေတို့ လက်ခံမလား လက်မခံဘူးလားဆိုတာလေးကမိမိတို့
အမြင်အရ အတွေးအရ ဆုံးဖြတ်ကြပါ ။
(၁)ထေရ၀ါဒ ဆိုသော ဝေါဟာရက ပထမ သင်္ဂါယနာ တင်ချိန်မှစ၍
ယခု ဆဠသင်္ဂါယနာ ၆ ကြိမ်တင်ထားသော ပါဠိတော် ၊ အဠာကထာ ၊
ဋီကာ အစရှိသော ပိဋက ကို ဆိုလိုပါသည် ။
ဒါဖြင့်ရင် ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ကြပြီး ထေရ၀ါဒမှာ မပါရှိတဲ့
အယူဝါဒတွေကို ကျွန်တော်တို့ လက်ခံကျင့်သုံးသင့်သလား ??
အဲဒါလေးကို အရင်ဆုံး မိမိကိုယ်တိုင် မေးကာ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်လိုက်ပါ
(၂)အများက ရှင်ဥပဂုတ်ကို ရဟန္တာလို့ အပေါ်က ပြောခဲ့သလို
သမုတ်ခဲ့ရင် ရဟန္တာရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာပုဒ်တွေရှိပါတယ်
ရဟန္တာမဆိုထားနဲ့ သောတာပန်အဆင့်လောက်ဆိုရင်တောင် မြတ်စွာဘုရားရှင် ပညတ်တော်မူတဲ့ သိက္ခာပုဒ်တွေကို အသက်ဟူသော အကြောင်းကြောင့်တောင်မှ မချိုးဖောက်ကြတော့ပါဘူး။
စူဠ၀ဂ္ဂပါဠိတော် ခုဒ္ဒက၀တ္ထုက္ခန္ဓကမှာ အရှင်ပိဏ္ဍောလဘာဇဒွါရမထေရ်ကို အကြောင်းပြုပြီးတော့ “န ဘိက္ခဝေ ဂိဟီနံ ဥတ္တရိမနုဿဓမ္မံ ဣဒ္ဓိပါဋိဟာရိယံ ဒေဿတဗ္ဗံ၊ ယော ဒေဿယျ အာပတ္တိဒုက္ကဋဿ”လို့ ဘုရားရှင်က ပညတ်တော်မူခဲ့တယ်။
(လူတွေကို တန်းခိုးမပြရ၊ ပြလျှင် ဒုက္ကဋ်အာပတ်သင့်၏)
ဒီနေရာမှာ ပိုပြီးနားလည်သပေါက်အောင်လို့ ဣဒ္ဓိသုံးမျိုးရှီတယ်ဆိုတာကို ရှင်းပြချင်သေးတယ်။
တစ်ယောက်ကို အများဖြစ်အောင် အများကိုတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်း၊ ကိုယ်ယောင်ဖျောက်ခြင်းစတဲ့ အရာတွေကို အဓိဋ္ဌာနိဒ္ဓိလို့ ခေါ်တယ်။
မိမိရဲ့ ပင်ကိုယ်မူလအသွင်သဏ္ဍာန်ကို ဖျောက်ပြီးတော့ ကျားယောင်ဖန်ဆင်းပြတာ ဘီလူးအဖြစ်ဖန်ဆင်းပြတာ စတဲ့ သူတစ်ပါးရဲ့ အသွင်အမျိုးမျိုး ဖန်ဆင်းပြတာတွေကို ၀ိကုဗ္ဗနိဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်။
ပကတိခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၌ အလားတူ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခု ရှိနေအောင် ဖန်ဆင်းပြတာကို မနောမယိဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်။
ဒီဣဒ္ဓိသုံးမျိုးထဲက ၀ိကုဗ္ဗနိဒ္ဓိကို လူတို့အားပြရင်သာ ဒုက္ကဋ်အာပတ်သင့်တယ်လို့ အဋ္ဌကထာဆရာက ဖွင့်ပြပါတယ်။
ရှင်ဥပဂုတ်တန်ခိုးပြခန်းကို ပြန်လည်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ။ ကျားအဖြစ်ဖန်ဆင်းတာ ဘီလူးအဖြစ်ဖန်ဆင်းတာ ဂဠုန်အဖြစ်ဖန်ဆင်းတာတွေကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ရဟန္တာဆိုတာ ဘုရားရှင် ဒီသိက္ခာပုဒ်ကို ပညတ်ထားတယ်ဆိုတာ မသိရင်သာ ကျူးလွန်မိချင် ကျူးလွန်မိမယ်။ ပညတ်ထားတယ်လို့ သိရင် ဘယ်တော့မှ မချိုးဖောက်ဘူး။ အသက်သေမယ်ဆိုရင်တောင် မချိုးဖောက်ဘူး။
ရှင်ဥပဂုတ်ဟာ ဒီသိက္ခာပုဒ် ပညတ်ထားတာကို မသိဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ငြင်းမယ်ဆိုရင်တော့ မိုးကြိုးပစ်တာကို ထန်းလက်ခြောက်နဲ့ ကာလိုက်တာနဲ့ အတူတူပဲလို့ ဆိုချင်တယ်။ ရှင်ဥပဂုတ်ရှိတာ မရှိတာ အပထား ဇာတ်လမ်းအရဆိုရင် ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးမှ သူပေါ်ခဲ့တာလေ။ မသိဘူးဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
ဒါဆိုရင် အရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်ကြီး ၀ိကုဗ္ဗနိဒ္ဓိပြတာကျတော့ ဘာပြောမလဲ
(အောင်ခြင်းရှစ်ပါးက နန္ဒောပနန္ဒ နဂါးကို အောင်တော်မူခြင်း ကိုဆိုလိုတာပါ)
ပညတ်တော်ကို စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ။ သေချာပြန်ပြီးတော့လေ..။
ပညတ်တော်မှာ “လူပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို မပြရ”လို့ ပါတယ်လေ။
ဒါကြောင့် အရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန် ၀ိကုဗ္ဗနိဒ္ဓိပြချိန်တုန်းက လူဝတ်ကြောင်တစ်ယောက်မှ အနားမှာ မရှိဘူး။ အရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန် ၀ိကုဗ္ဗနိဒ္ဓိပြတာကို ဘယ်လူဝတ်ကြောင်မှလဲ မမြင်တွေ့နိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် အရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်ဟာ ဒီပညတ်တော်ကို ချိုးဖောက်ရာမရောက်ပါဘူး။
နောက်တစ်ခုစဉ်းစားစရာရှိတာက အရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန် ၀ိကုဗ္ဗနိဒ္ဓိပြချိန်တုန်းက ဒီပညတ်တော်ကို ဘုရားရှင် မပညတ်ရသေးတာလဲ ဖြစ်နိင်တယ်။
ရှင်ဥပဂုတ် ၀ိကုဗ္ဗနိဒ္ဓိပြချိန်က “မပြရ”လို့ ဘုရားရှင်က ပညတ်ပြီးဖြစ်သလို သူ ၀ိကုဗ္ဗနိဒ္ဓိပြတာလဲ လူတွေ အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ကို တွေ့မြင်ကြတာပါ။ (ဇာတ်အလမ်းရပြောတာနော်)
အရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန် ပရိနိဗ္ဗာန်စံခါနီးမှာ ဘုရားရှင်က တန်ခိုးပြခိုင်းတော့ ၀ိကုဗ္ဗနိဒ္ဓိမပြပဲ “အဓိဋ္ဌာနိဒ္ဓိ”တွေကိုပဲ ပြသွားခဲ့တယ်လေ။
ဒီလောက်ဆိုရင် နားလည်လောက်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။
(၃)ရှင်ဥပဂုတ်ဟာ ယနေ့တိုင် အသက်ရှင်လျှက်ရှိကာ
သမုဒ္ဒရာအတွင်း သီတင်းသုံးနေသည်ဟု ပြောနေကြသော အကြောင်းလေးကို
နည်းနည်းရှင်းပြပါရစေ ။ ရဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုကတည်းက ခန္ဓာကို စက်ဆုပ်ရွံရှာ
နေပါပြီ ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီး အမြန်ဆုံး ပျက်ဆီးချင်နေပါတယ် ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေတာကိုက
အပုပ်ကောင်တွေ တွယ်ကပ်နေသည့်အလား ရွံရှာနေပါတယ်။
ဒါဆို ရှင်ဥပဂုတ်ဟာ ရဟန္တာဖြစ်ပြီး ယနေ့ အချိန်ထိတိုင် ဘာကြောင့်များ
(၄)နေကိုကြည့်၍ ဆွမ်းစားခြင်း ဆိုသော အရာမှာလည်း မှားယွင်းသော
အယူတစ်ခုပါ ။ ပုတုဇဉ် သာမဏေ တောင် ဆွမ်းစားတဲ့အခါ
သပိတ်အမှတ်နဲ့စားရပါတယ် ။ ဒီလိုမထေရ်မြတ်က
နေကိုကြည့်၍ ဘာကြောင့် ဆွမ်းစားရတာလဲ ?
စသည့် ဆန်းစစ်မှုများအပြင်အခြားသော မိမိအတွေးအမြင်မှီသလောက်
တကယ်ရှိမရှိ ဒီအယူအဆတွေက မှန်ကန်မှုရှိမရှိ
စဉ်းစားပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ပါ ။ ကိုယ်အသက်ရင်းပြီး ကိုးကွယ်ရမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ
သရဏဂုဏ်မပျက်ဖို့အတွက် အယူမှားမှုတွေကိုတော့ ဖယ်ရှားရပါလိမ့်မယ်။
ဒီ အကြောင်းအရာတွေကို ဘုန်းကြီးများက အမုန်းခံ၍ သာသနာအတွက်
လမ်းမှန်ပြောသော်လည်း အချို့က ဘုန်းကြီးက ဘုန်းကြီးအလုပ်မလုပ်ဘူးပြောကြပါတယ်
ဒါဆို ဘုန်းကြီးက ထေရ၀ါဒ လမ်းစဉ်တွေ မှန်ကန်ဖို့ လမ်းပြဆောင်ရွက်
ပေးဖို့ မဟုတ်ဘူးလား သံဃာတော် အရှင်မြတ်တွေက ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားဓမ္မတွေနဲ့
လူ့လောကက မှားယွင်းမှုတွေကို တတ်နိုင်သလောက် ပြင်ဆင်ပေးရမယ်မဟုတ်ဘူးလား
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့ မှားယွင်းတဲ့ အယူဝါဒတစ်ခုနဲ့ တကယ်စာပေတတ်
ကျမ်းဂန်နှံ့စပ်သော ဘုန်းတော်ကြီးများကို ပြစ်မှားမိမှာစိုး၍ ကျွန်တော်ရေးသား
လိုက်ရပါသည် ။ တစ်ခုခုမှားယွင်းခဲ့သော် စာရေးသူ ကျွန်တော်၏ အမှား
Credit : အောင်ကျော်ခိုင်(ပုသိမ်)
သူဌေးဖြစ်ချင်ရင် ဒါတွေ ရှောင်ပါ..